Homo erectus: njirimara, mbido, mmalite na omume | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 13/10/2021 17:54 | Ciencia
Anyị maara na mmadụ agafeela ọtụtụ ụdị na mgbanwe ruo na mmadụ dị ugbu a. Ụdị anyị ugbu a, Ndị ọzọ, sitere na ụdị ndị ọzọ. Otu n'ime ha bụ iwu Homo erectus. Homo erectus bụ nwoke oge gboo biri n'akụkụ ụwa niile n'oge akụkụ Pleistocene. Achọpụtara ihe nlele kacha ochie na Demanisi, Georgia, wee debe ihe dị ka nde afọ 1,8. Nchọpụta mbụ nke ụdị a mere na 1891 n'agwaetiti Asia nke Java, nke bụzi akụkụ Indonesia.
Ke ibuotikọ emi anyị na-aga-agwa gị ihe niile mkpa ka ị mara banyere Homo erectus, njirimara na akụkọ ya.
1 Mmalite nke Homo erectus
3 Àgwà Homo erectus
Mmalite nke Homo erectus
Nwoke oge ochie a adịla ndụ ogologo oge n'ụwa. A na -agwakọta echiche n'ụbọchị mbibi ya. Ụfọdụ ndị ọkà mmụta gbasara mmadụ kwenyere na ọ mere ihe dị ka afọ 300.000 gara aga, ebe ndị ọzọ na -ekwu na ọ mere afọ 70.000 gara aga. Nke a emeela ka ụfọdụ ndị ọkachamara kwenye na ya na ya bi homo sapiens, mana nke a abụghị ọnọdụ a na -ahụkarị taa.
Mmalite nke Homo erectus ọ bụkwa arụmụka. N'ụzọ dị otu a, mmadụ tinyere ya n'Africa, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọkà mmụta gbasara mmadụ anaghị ekwenye ma kpọọ ihe nlele ahụ achọtara n'ebe ahụ Homo ergaster. Ndị na -akwado ọnọdụ a na -ekwu na Homo erectus Ọ bụ obodo Asia.
Otu njiri mara pụrụ iche nke nwoke ochie a bụ ikike anụ ahụ ya, nke dị mma karịa nke ụdị ndị gara aga. Otu n'ime isi ihe kpatara mgbanwe a bụ nchọnchọ otu esi emeri ọkụ, nke mere ka ọ ka mma iri nri.
Homo erectus bụ otu n'ime ndị nna ochie Homo sapiens. Ọkwa nke mmalite mmadụ n'ime ya Homo erectus Ọ bụ otu n'ime ọkwa amabeghị, yabụ ọtụtụ echiche dị iche iche na -ebikọ ọnụ. N'ihi ya, otu n'ime ha laghachiri Afrịka nde afọ 1,8 gara aga.
Ekwesiri ighota na ndị ọkachamara ndị ọzọ kwenyere na ihe foduru achọtara na kọntinent ahụ bụ nke ụdị ọzọ, Ergaster. Onye ọ bụla kwenyere n'eziokwu na na ọdịdị nkel Homo erectus, ndị mgbe ochie ghọrọ ndị nkwagharị wee hapụ Africa.
Nchọpụta mbụ nke Homo erectus mere na East Asia, ma a hụkwara ozu na Eurasia. N'ebe dịpụrụ adịpụ ebe a na -ahụ nsị, enwere ike ikwenye na ihe ịga nke ọma nke ụdị a. Nke a na -ebute ọdịiche anụ ahụ na ọdịbendị dị ole na ole n'etiti ha, n'ihi na ha ga -eme mgbanwe maka ọnọdụ dị iche iche nke mpaghara ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ihu igwe na Europe jụrụ oyi n'oge ahụ ma ọ bụrụ na achọpụtaghị ọkụ, nke a ga -abụ nnukwu nsogbu.
Ndị ọkachamara niile na -ekwenye na ọdịdị nkwagharị nke agwa Homo erectus. Ihe akaebe achọtara na -egosi na ọ bụ hominid mbụ hapụrụ Afrịka. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ rutela Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Echiche kachasị ama bụ na ị nwere ike iji àkwà mmiri kpụrụ n'oge akpụrụ mmiri maka njem a. Mgbasa ya arụpụtala ọ ka na -apụta n'akụkụ Indonesia, China, Europe ma ọ bụ Central Asia.
Dị ka ihe foduru niile foduru, ọ dịghị mfe ịchọpụta njirimara anụ ahụ na nke ndu. Ndị ọkà mmụta sayensị na -atụle paramita dị iche iche ka amata, ọkachasị ịdị elu ma ọ bụ ọdịdị nke okpokoro isi. Dịka ọmụmaatụ, ezé na -enye ozi dị oke mkpa gbasara nri na omume ndị ọzọ dị mkpa.
N'okwu a, anyị ga -agbakwunye ọnụnọ nke ọtụtụ ụdị ego, nke nwere njirimara dịtụ iche. Otú ọ dị, ụfọdụ atụmatụ nke Homo erectus nke ahụ yiri ka ọ nabatara ebe niile.
Atụmatụ nke Homo erectus
Amachaghị banyere akpụkpọ ahụ Homo erectus. Dị ka anyị niile maara, ọ nwere glands gụrụ mmiri, mana ọ nweghị mkpa ma ọ bụ sie ike. N'ihe gbasara ọkpụkpụ, usoro nke pelvis nke Homo erectus o yiri nke ụmụ mmadụ taa. Otú ọ dị, ọ ka ibu ma sie ike. Ihe yiri nke ahụ mere femur ahụ, ebe ihe foduru pụtara, ọ dị nfe ịmụ ihe. Na mgbakwunye na oke ya, akara ụfọdụ nke itinye akwara na -egosi na ahụ siri ike ma sie ike.
El Homo erectus, dị ka aha ahụ na -egosi, na -ejegharị n'ụkwụ abụọ, nke yiri Ndị ọzọ. Na mbụ e chere na ịdị elu nke ụmụ nwoke dị obere, ihe dịka 1,67 mita. Ka o sina dị, ihe fọdụrụ ọhụrụ agbanweela ụzọ iche echiche a. Ugbu a, a na -eme atụmatụ na okenye nwere ike iru mita 1,8, nke dị ogologo karịa hominin gara aga.
Agba nke Homo erectus Ọ dịkwa ike nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ nweghị agba. Eziokwu ahụ bụ na ezé pere mpe dọtara mmasị dị ukwuu. Ndị ọkà mmụta ihe ochie achọpụtala na ka ahụ na -ebuwanye ibu, nha nha ahụ na -ebelata.
N'otu aka ahụ, ọ na -adị ka akwara agba ahụ adịla ntakịrị na akpịrị na -agbada. Ọ ga -ekwe omume na ọnụnọ ọkụ na anụ esiri esi nri na -emepụta mmetụta a n'ụzọ dị mfe. Okpokoro isi nke Homo erectus o nwere njirimara atọ pụrụ iche. Nke mbụ bụ ọkpụkpụ supraorbital kwụ ọtọ, n'agbanyeghị na ọ nweghị ụdị ahụ achọtara na Gris na France. N'aka nke ọzọ, ha nwere mkpọda na -enweghị isi na okpokoro isi, nke a na -ahụkarị n'etiti ndị Eshia. Ndị a bụkwa ndị nwere oke occipital overhangs.
Otu n'ime nsogbu ndị a na -atụ anya na Homo erectus ọ bụ ma o jirila asụsụ a na -asụ n'oge ọ dị ndụ. Otu echiche gbasara ụdị a na -egosi na ọ bụ ha bụ ndị mbụ jiri ya na obodo ha kere.
O siri ike ịmata ma ozizi a ziri ezi site n'ịmụ fossil. Ọ bụrụ na bayoloji yiri ka ọ na -akwado eziokwu a, n'ihi na ha nwere ụbụrụ na usoro ọnụ iji mee nke a.
Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya nke Daniel Everett, onye isi kọleji nka na nka na Mahadum Bentley dị na Massachusetts, kwadoro nkwenye a. Dabere na nchọpụta ha, okwu mbụ ndị oge gboo kwuru site n'aka ndị otul Homo erectus.
Nri bụ otu n'ime akụkụ kacha atọ ụtọ na nyocha nke Homo erectus. Karịsịa, mgbe ịchọpụtachara ka esi eme mgbanwe ndị mere mgbe ọkụ gachara. Na mbụ ọ bụ anụmanụ na -eme ihe niile, iji nweta anụ, ọ na -eji ihe ozu nke anụmanụ. Kedu ihe ọzọ, Ọ na -anakọtakwa akwụkwọ nri na ahịhịa, na -achọ nri zuru oke ka o kwere mee.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Homo erectus na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Homo erectus